Oge ọkọchị na Berlin, ihe ị ga - eme na otu ị ga - esi anụ ụtọ ya | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Berlin, Atụmatụ
Anwụ na-achasi ike ma na-enwu gbaa na Northern Hemisphere na obodo ndị na-ajụkarị ọdịnala na-amalite ikpo ọkụ. Berlin bụ otu n'ime ha, ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma maka ndị bi na ya, ọ naghị eru n'okporo ọkụ nke Madrid ma ọ bụ Rome na-eme.
Berlin bụ obodo nwere obere oge ọkọchị ma ọ bụ na oké okpomọkụ. Ma ee, ọ bụrụ na ị nwere uba ịnọ ebe ahụ mgbe ọ na-ekpo ọkụ mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ obodo dị iche, mepere emepe, na-atọ ọchị. Ya mere, lee ihe ụfọdụ ị nwere ike ịhụ ma mee n’oge ọkọchị na Berlin.
1 Nwee mmiri
2 Ememme ọkọchị
3 Nwee nri n'èzí
4 Getaways nke Berlin
Agbanyeghị na Berlin bụ obodo anaghị asọ asọ n'oké osimiri, ị nwere ike họrọ gaa ebe igwu mmiri nke ọha ma ọ bụ kwaga n’ọdọ mmiri dị nso. Otu n'ime ọdọ mmiri ọha na-akwadokarị bụ Akpokolo, na Neukölln, ebe ọ nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gburugburu ya na trampolines si na 1 ruo 3 mita elu, a n'elu ikpo okwu na-awụlikwa elu si iri mita elu na a slide.
O nwere otutu ọdọ mmiri, ụfọdụ na-emighị emi maka ụmụaka ịnụ ụtọ ya, ebe ụmụaka, ebe ọzọ iri nri ma n'ezie, mmiri ozuzo na ime ụlọ mgbanwe. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịga n'oge oge agụmakwụkwọ, ọ ka mma maka enweghị ụmụaka. Saịtị a nwekwara sauna na ihe niile Ihe mgbagwoju anya mepere site na elekere asatọ nke ututu rue elekere asatọ nke abali.
Nwere ike ịbanye ruo otu awa tupu ị mechie, mana ọdọ mmiri ahụ mechiri ọkara awa tupu oge ahụ. Ọnụego ya bụ 5, 5 euro site na Mọnde ruo Fraịde maka otu awa na ọkara nke ojiji nke ọdọ mmiri.
Ọzọkwa enwere ọdọ mmiri nkeonwe, ụfọdụ ndị na-ajụ oyi karịa ndị ọzọ dị ka nke dị na mbara ala nke ụlọ SoHo (na nke ọ bụghị mmadụ niile na-enweta ...), na nke dị na Badeschiff, n'agbanyeghị na ọ dị mkpa na ị ga-aga nke ukwuu n'isi ụtụtụ iji zere Ìgwè mmadụ ahụ ma hụ na ebe na ụfọdụ ụtụtụ udo.
Nhọrọ ọzọ, ihe okike, bụ gakwuru otu ọdọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ụgbọ ala ọ na-esiri ike. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ na ọdọ mmiri ọha jupụtara na ndị mmadụ, chere ka ị hụ ọdọ mmiri. Mgbe ụfọdụ, ha na-agbawa! Na n'ezie, mmiri abụghị nke ndị Caribbean. Ma ị nwere ike ịma Schlahtensee ma ọ bụ Weifensee ma ọ bụ, ntakịrị n'ihu, Onyeka Ihe kacha mma bụ ịchọpụta tupu mmadụ ole enwere ...
N'ikpeazụ, Berlin nwere ọtụtụ ọwa mmiri na ị nwere ike ịgagharị na ha n'ime ụgbọ ala dị ala ma dịkwa mfe ma ọ bụ banye maka njegharị. Otu ụlọ ọrụ njegharị a tụrụ aro ya bụ Ndidi Ochie, jiri obere ụgbọ mmiri maka mmadụ 11. Nwere ike ịgagharị na Osimiri Spree, ebe a na-alụ ọgụ n'oge a na-alụ Agha Worldwa nke Abụọ, ma ọ bụ site na mmiri dị jụụ nke Landwehrkanal.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị njem na-arụsi ọrụ ike na-amasị isonye na ndụ nke obodo ahụ ị ga-aga ememme. Obodo ndị Europe nwere ememme maka oge ọ bụla na Berlin abụghị otu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anwụ na-acha!
El Mee 1 na-agaỌ bụ ezie na ọ gafeela, ọ bụ otu n’ime nnọkọ oriri na-ekwo ekwo, ọ bụ ezie na okwu pati anaghị dabara ya nke ọma, ka ọ dị? E nwere ngagharị, ngagharị na ọtụtụ akụkọ ntolite. Otu ihe a bu MotzstraBenfest, the Day of St. Christopher's Street, the Fète de la Musique and the Karneval der Kulturen. Ememme ọhụrụ a bụ a ihe omume di iche iche na-ewere ọnọdụ na Neukölln na Kreuzberg kemgbe 1996.
Kinddị Pahụnanya Parede, teknụzụ teknụzụ, ezinụlọ na ndị enyi niile nwere agba, ụdị na agụụ mmekọahụ. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ bụ multiculturalism ọ dị mma, kachasị mma ị ga-ahụ na Germany. Enweghi esemokwu site na esemokwu, onye butere echiche a, onye na-ahazi ya, ọ bụrụ na ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ na ọ bụghị, mana hey ... ọ na-aga n'ihu na-eme ememme ma ị gaghị echefu ya.
El Opbọchị Christopher Street Ọ bụ ụdị nke Berlin Pride Parade mere na Kreuzberg. All "obere" ma ọ bụ ewepu n'obodo-ezukọta ebe a na-abụghị nke ndị ọzọ, yiri nnọọ, ha leit ebumnobi bụ ịdị n'otu otú kwabatara na ndị gbara ọsọ ndụ na-etiti nke ntị. N'ịga n'ihu na nwoke nwere mmasị nwoke ma ọ bụ nwee mmekọahụ isiokwu, e nwekwara Motzstrabenfest, na Schöneberg.
Ọ bụ mmemme a na-eme kwa afọ, ọ bụghịkwa ngagharị dịka ọ na-adị na ngwụcha izu niile. Ndị na-eto eto, ndị agadi, ndị nwoke nwere mmasị nwoke ma ọ bụ ndị nwoke na nwoke na nwanyị, ha niile gbakọtara ebe a n'otu mmụọ nke ịnụ ụtọ na ịnabata ndị dị iche. A otutu agba, otutu enwu ... Ọ bụ ya Fète de la Musica yiri? Ọ bụghị nke ukwuu, ka emechara, ọ bụ ụbọchị ezumike ụwa, nke a na-eme n’obodo dị iche iche gburugburu ụwa.
Ọ bụrụ na mmiri ozuzo ọ na-ata, ọ dabere na afọ na ihu igwe ya iji nwee ike ịnụ ụtọ nke a ememe nke mba na ndi di iche-iche nke a na-eme mgbe nile na June 21. Ndị ọzọ na-anọ karịa awa abụọ ma ọ bụ ọbụlagodi ụbọchị ole na ole. Ọ gụnyere ịga ije, ịchị ọchị, ịbụ abụ na ịgba egwu nke ukwuu. Ememme ndị ọzọ? Ndị kasị azụ ahịa bụ Pop-Kultur, The Down site Ọdọ mmiri, na Weibensee, ndị N'okpuru Osimiri ma ọ bụ Ememme Ala Dị Nsọ, awa abụọ site na obodo ahụ.
Nwee nri n'èzí
Ọ bụrụ na ị nwere ike iri ihe, rie achịcha bekee ma nwee bea ole na ole ka mma, nri? N’ogige ntụrụndụ nke Körnerpark, Görli, Hasenheide, Tiergarten ma ọ bụ Tempholf ị nwere ike ịmị anụ. Ma oburu n’inweghi imi ihe ubi, igha n’ulo ahia buru ibu ma zuta ebe a na-achicha nke anyi meburu iri. Ezigbo ihe! Na Ogige Thai Ọ bụkwa ebe dị mma iji were ụfọdụ sandwiches, dịka ọmụmaatụ, ebe ndị mmadụ pere mpe ma ndị na-ere ahịa n'okporo ámá na-ere nri Thai na-ebu ọnụ.
na spatis ha bụ ndị a ma ama na ama na Berlin. Ha ma otu esi ere nri na ihe onunu di iche iche, ehihie na abali, ma mgbe ubochi na-abia, ha na-etinye oche ufodu gburugburu iji kporie okwu. Obodo jupụtara n'ụdị a kiosks gastronomic nke jisiri, dị ọnụ ala.
Nri nri ụgbọ erughi eruola ebe a ka oge ọkọchị bụ oge eji eme ememme nri: Ememe Ezumike nke Vegan, Dịka ọmụmaatụ, ya Ememme Gastronomic nke Berlin, nke Street Food Berlin ma ọ bụ Markthalle 9, bụ ụfọdụ ihe atụ.
Agaghị m ahapụ ndepụta m nke nleta ọdụ ụgbọ elu ochie mgbe agha gachara nke ghọrọla Ogige Tempelhofer. Ga-ahụ ụlọ ndị Nazi, ụzọ ochie na ụlọ elu njikwa ya na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpori ndụ na picnic. Ọ bụrụ n ’ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ skuta, ịnwere ike ịgagharị na Berlin otu masịrị gị. Buru nke ahụ n’uche!
Getaways nke Berlin
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ị nwere ike isi na Berlin pụọ mgbe ọ bụla ma mara gburugburu ya. Usesgbọ ala na ụgbọ oloko nwere njikọ chiri anya ma nye ohere maka mmemme dị mma. Nwere ike ịga Teufelsberg, gaa mara mma Pfauueninsel ma ọ bụ Spreewald.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Berlin » N'oge ọkọchị na Berlin, ihe ị ga-eme na otu esi enwe ọ .ụ
Njem si Madrid gaa Havana maka naanị 640 euro